Kenya oo weerar ku bilowday Ganacsatada Soomaalida, 5 Xawaaladood ayaa la xiray – Puntlandtimes
NAIROBI(P-TIMES)- Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray magaalada Nairobi ayaa sheegaya in ay dawladda Kenya hadda xirtay shan ka mid ah Xawaaladaha Soomaaliyeed ee kuyaalay magaalada Nairobi, iyadoo aan lahaynin Sabab cad oo ay talaabadan u qaaday Xukuumadda Kenya.
Ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo ilaa hadda laga hayo, balse wararka ayaa sheegaya in Xawaaladaha loo sheegay in aysan ka Ganacsan karin gudaha dalka Kenya oo ay sababo ammaan awgeed talaabadan u qaaday.
Kenya waxay xalay joojisay in dal kugalkeeda ku dhajiso baasaboorka Soomaaliga, waxayna sababta uga dhigtay Sababo Amni, taas oo loo arkay mid la doonayo in lagu dhaawaco xariirka labada dal.
Dawladda SOomaaliya wali kama aysan jawaabin hadalada ka soo yeeray Kenya iyo go`aamada ay qaadatay, marka laga reebo wasiirka Maaliyada Soomaaliya oo ganacsatada ugu baaqay in ay dalkooda maalgashadaan oo wadamada Shisheeye kasoo baxaan.
Jeegaanta iyo shirkadooda dahabshiil ayaa ka dambeeya tilaabada ay kenya qaaday. Waa in xafiisyada dahabshiil ee somaliya inteeda kale kuyaal albaabada loo xiro. Haku ekaadaan hargaysa